November 5, 2021 - ApannPyay Media
အသားအရေနဲ့ အလှအပအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုအောင် သဘာဝအတိုင်းလှပစေမဲ့ နည်းလမ်း ၁၁မျိုး
November 5, 2021 by ApannPyay Media
အသားအရေနဲ့ အလှအပအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုအောင် သဘာဝအတိုင်းလှပစေမဲ့ နည်းလမ်း ၁၁မျိုး ၁။ မျက်နှာအရောင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် သင့်မျက်နှာကို မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲ အသားအရေကြည်လင်ဝင်းပစေဖို့အတွက် Chamomile လက်ဖက်ရည်ကို အသုံးပြုပါ။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ Chamomile ဝယ်ယူပြီး လက်ဖက်ခြောက်အစာ အဆိုပါ Chamomile ကို ရေနွေးထဲမှာခပ်ပေးပါ။ ရေနွေးထဲမှာ ခပ်ပြီး မိနစ် ၃၀ခန့် ဓာတ်ဗူးထဲမှာ နှပ်ထားပေးပါ။ မနက်စာ မစာခင်မှာ အဆိုပါရေနွေးကို ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းရောထည့်ပြီး သောက်သုံးပေးပါ။ ၂ပတ်အတွင်း သင့်မျက်နှာပေါ်က အသားအရေအတွက်ထူးခြားမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ၂။ မျက်တောင်မွှေးရှည်လျားပြီး မျက်ခုံးမွှေးထူစေဖို့အတွက် မျက်တောင်မွှေးနဲ့ မျက်ခုံမွှေးအားကောင်းဆေးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အဟာရပေးကျွေးနိုင်ဖို့ အိပ်တွင်းဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘာလဲဆိုတော့ ဗာဒံဆီ၊ နှမ်း၊ Burdock Oils နဲ့ Vitamin … Read more
ညဘက်အိပ်မပျော်၊ သုတ်အားနည်း၊သုတ်ကုန်ခမ်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်သက်သာစေမယ့် ကင်းပွန်းချဉ်နဲ့ ငါးခုံးမ
ညဘက်အိပ်မပျော်၊ သုတ်အားနည်း၊သုတ်ကုန်ခမ်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်သက်သာစေမယ့် ကင်းပွန်းချဉ်နဲ့ ငါးခုံးမ ညအိပ်ရင် တဖျက်ဖျက်နဲ့ လန့်လန့်နိုးနေတတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေရပါတယ်။ အိပ်ပြီဆိုတာနဲ့ မနက်မိုးလင်းထိ တစ်ချိုးထဲ အိပ်စေတဲ့ဆေးနည်းလေးရှိရင် ကူညီပါ ဆိုတဲ့ အသိတစ်ယောက်အတွက် ဆေးနည်းလေး ကို မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ ဆေးနည်းကတော့ – ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်လိုလျှင် ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကို ငါးခုံးမနဲ့ ဟင်းချက်စားပေးရပါမယ်။ ဒီဟင်းလျာက အိပ်ပျော်စေရုံမက သုတ်အားနည်း၊ သုတ်ကုန်ခမ်းတဲ့ရောဂါ၊ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် သွေးသားစင်ကြယ်စေပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိရင်လည်း သက်သာစေပါတယ်။မှတ်ချက်- ညစာသာ ချက်စားပေးပါရန်။ Credit-Shwe La Thar Win ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္၊ သုတ္အားနည္း၊သုတ္ကုန္ခမ္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္သက္သာေစမယ့္ ကင္းပြန္းခ်ဥ္နဲ႔ ငါးခုံးမ ညအိပ္ရင္ တဖ်က္ဖ်က္နဲ႔ လန႔္လန႔္နိုးေနတတ္ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အိပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ မနက္မိုးလင္းထိ တစ္ခ်ိဳးထဲ အိပ္ေစတဲ့ေဆးနည္းေလးရွိရင္ ကူညီပါ … Read more
ပါးစပ်နံသော ပြသာနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ အလုပ်မှာကျောင်းမှာ နေ့စဉ်တွေ့နေရသောသူတွေထဲမှာ အပြင်ပိုင်းလှသလောက် စကားပြောကြည့်ရင် ပါးစပ်ကနံတာကို သတိမထားမိကြသောသူက တော်တော်များပါတယ်။ ပါးစပ်နံလိုက်တာလို့ပြောပြန်ရင်လည်း ရိုင်းရာကျမှာပါ။ သူများကို မပြောခင် ကိုယ်ကမနံအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။ ၀၁. သေသေချာချာဝါးစားပါ အစားကို စားသောအခါ သေသေချာချာ ဝါးစားခြင်းဖြင့် ပါးစပ်အတွင်းမှာ လိုအပ်သောဓါတ်(သို့)တံထွေးကိုထွက်စေပါတယ်။ခံတွင်းတံထွေးများများထွက်စေခြင်းဟာ ခံတွင်း၏ခြောက်သွေ့မူကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ပါးစပ်နံတာကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပီကေစားရင်လည်း အဆင်ပြေမှာပါ။ ၀၂. ထမင်းကိုတော်ရုံသာစားပါ ထမင်းကို ဗိုက်အပြည့်စားသောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာ ရှိသောအစာအိမ် တခုတည်းမဟုတ် အခြားသော ကလီဇာ တွေကိုအလုပ်ပိုလုပ်စေသောကြောင့် ပါးစပ်နံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အစားကို ဗိုက်တင်းအောင်မစားပဲ အသင့်အတင့်သာ စားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ။ ၀၃. ပဲ၊ နွားနို့၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ ကိုများများစားပါပဲ၊ နွားနို့၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံကိုများများစားခြင်း ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း … Read more
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် မရှိရင် ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ်… Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျား ပီသတယ် ထင်နေလားဆေးလိပ်/ အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား..? ဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား ?နောက်ဆုံးစစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား? တစ်ကယ် တမ်းတော့ ယောက်ျားပီသဖို့ သူများသားသမီးကိုမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ… မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို … Read more
လက်တွေ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ကတ်ထူပြားမော်တော်ယာဉ်တို့ကို တီထွင်ဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်စု (ရုပ်သံ)
November 5, 2021 November 5, 2021 by ApannPyay Media
လက်တွေ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ကတ်ထူပြားမော်တော်ယာဉ်တို့ကို တီထွင်ဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်စု (ရုပ်သံ) ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ် crazy လူငယ်အဖွဲ့ဟာ ဈေးကြီးတဲ့ပြိုင်ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များကို ကတ်ထူပြားဖြင့်ပုံတူပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အင်တာနက်မှာ လူသိများပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေခဲ့ပါတယ်။သင့်ကိုယ်ပိုင် Ferrari ပြိုင်ကား သို့မဟုတ် Ducati မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဝယ်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ ဒီလူငယ်တွေလို ဖန်တီးကြည့်လိုက်ပါ။NHẾT TV ဆိုတဲ့ ယူကျုချန်နယ် နောက်ကွယ်က လူငယ်တစ်စုဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် သတ္တုအပိုင်းအစနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကဒ်ထူပြားများအဖြစ် အစားထိုးအသုံး ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဖန်တီးတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားတွေက ကြည့်ရတာကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းသူတို့ကြိုးစားပမ်းစား ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာပါ။အများသုံးလမ်းပေါ် မှာ လက်တွေ့ မောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကတ်ထူပြား Lamborghini ကား သို့မဟုတ် Ducati ကတ်ထူကိုယ်ထည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ အရာတွေမို့ အခုလိုပြုလုပ်နိုင်တာက … Read more
ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ “ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ” ဒီနေ့ ပျော်သည်မိမိဆိုင်ရှေ့မှာချိတ်ထားတဲ့အရုပ်လေးတွေကိုရပ်ကြည့်နေတဲ့ကိုရင်လေးကို …ကိုရင်လေးဘုရားဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းပြည့်စုံပါလားဘုရား လို့ မေးလိုက်တော့ပြည့်စုံပါတယ် ဒကာမကြီး။ကိုရင်လေးစာဝါလိုက်နေပါလားဘုရားဆို တော့၁ တန်းပါ တဲ့ .ကိုရင်ဘုရားအရုပ်လိုချင်လို့လားဘုရားလို့မေးလိုက်တော့မိမိကို ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းလေးငြိမ့်ပြ တယ်။ကိုရင်လေးလိုချင်တဲ့ကားအရုပ်လေးတွေကိုလှူပေးခဲ့တယ်။မိမိလှူပေးတာတွေ့တော့ဘေးကလူတစ်ချို့က … ကိုရင်ဆိုတာစာသင်ရမှာလေ ကစားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ .အလွန်ဆုံးရှိ၆ – ၇ နှစ် အရွယ်မိဘ နဲ့ ဝေးပြီးခုလို အလွန်အေး တဲ့မန္တလေး ဆောင်းနံနက်ခင်း၆ – ၇ နာရီမိမိတို့ အများစုကုတင်ပေါ် စောင်ခြုံလို့ကွေးကောင်းတုန်း အချိန် …အနွေးထည် ဦးထုပ်မပါခြေဗလာ နှင့်ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဘုရားသားတော်ကိုရင်လေးနေရာဝင်ကြည့်ပါကလေးဘဝအရွယ်မှာသူလည်း အဖေ့အိမ်မှာ ပျော်ချင်မှာပဲအမေ့ရင်ခွင်မှာ နွေးထွေးမှုတွေလိုချင်မိမှာပဲလေ …မောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားချင်မိမှာပေါ့ … … Read more
၁၁လပိုင်း ငွေဝင်လာစေရန် အစွမ်းထက် ယတြာ
၁၁လပိုင်း ငွေဝင်လာစေရန် အစွမ်းထက် ယတြာ ၆.၁၁.၂၀၂၁ မနက် ၆:၀၀ ကနေ ၁၁:၃၀ အတွင်း မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ဆွမ်းနှင့် အာလူးကြော် ကပ်လှုပေးပါ။ရေနွေကြမ်း ၃ခွက်ကပ်လှုပေးပါ။ဆီမီး(၃)တိုင် ပူဇော်ပေးပါ ရှဲယား မျှဝေပြီးမှ ယတြာပြုလုပ်ပါ။(၇)ရက်သားသမီး အားလုံးပြုလုပ်လို့ရအောင်ပါ။သမ္ဗဒ္ဓေုဂါထာ (၈)ခေါက်ရွတ်ပေးပါ (၄)ရက်အတွင်း အကူအညီအထောက်အပံ့များ ရရှိစေပြီး ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဖိနပ်ပျတ် နာရီပျတ်တွေ ဖုန်းအပျတ်တွေ အိမ်မှာရှိရင် မထားပါနဲ့ ပစ်လိုက်ပါ လာဘ်ပိတ်စေတက်ပါတယ် ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆွမ်း အာလူးကြော် ကပ်လှုပါတယ် ကပ်လှုရသော စေသနာ သဒ္ဒါတရားကြောင့် ၁၁လပိုင်းမှာ ငွေလမ်းပွင့်ပြီး အရပ်(၁၀)မျက်နှာမှ ငွေများဝင်လာပါစေဟုဆုတောင်းပါ။ဒီထက်မက လှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေဟုလဲ ဆုတောင်းပါ ။ရှဲယား မျှဝေထားပေးပါ ၁၁လပိုင်း ငွေဝင်စေရန် ယတြာအပ်လို့ရပါပြီ ငွေဝင်စေရန် အာမခံပါသည် ဆရာစီ ယတြာလာအပ်လို့ရပါပြီ … Read more
သင် ဘယ်အလုပ်နဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်မလဲ အင်္ဂဝိဇ္ဇာနည်းအရ
သင် ဘယ်အလုပ်နဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်မလဲ (အင်္ဂဝိဇ္ဇာနည်းအရ) ဘယ်အလုပ်နဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မလဲ မြန်မာ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာခန်းလေးဆိုရင်မမှားဘူးပြောလို့ရသလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းထိရောက်သောနည်းလေးတစ်ခုဆိုသည်ကိုငြင်းဖွယ်ရာပင်မရှိနိုင်ရလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောပညာရပ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်မည်ကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်မျိုးတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေရရှိစေမလဲတိုးတက်နိုင်မလဲသိဖို့ဆိုရင်တွက်ချက်နည်းလေးကတော့ သိလိုသူရဲ့ မြန်မာမွေးနေ့ သက္ကရာဇ်ကိုတည်ပြီး ၇ နှင့်စားပါ . . . . . ၂ ကြွင်းခဲ့ရင် တနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း ၃ ကြွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် တနင်္လာနံ နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း ၄ ကြွင်းရင်တော့အင်္ဂါနံ လုပ်ငန်းများ ၅ ကြွင်းရင်တော့ ဗုဒ္ဓဟူးနံသင့်လုပ်ငန်း ၆ ကြွင်းရင်တော့ ကြာသပတေးနံလုပ်ငန်းများနှင့် ၀ ကြွင်းရင်တော့ သောကြာနံလုပ်ငန်းများဖြစ်ကာ ၁ ကြွင်းရခဲ့ရင်တော့ စနေနံ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၇ ရက်သားသမီးတို့အဆင်ပြေချောမွေ့စေသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာအပေါင်း အသီးသီးအားလေးစားဂါဝရပြုပါသည်။ သင်ဆရာမြင်ဆရာအပေါင်းအားဂါဝရပြုလျက် လူသားအပေါင်းချစ်သောမျက်စိဖြင့် သာကြည့်ရှူနိုင်ကြပါစေ။ ခါတော်မှီ သင္ ဘယ္အလုပ္နဲ႔ … Read more
ကားရောလူရောပျောက်ဆုံးနေလို့ ကူညီပြီး ရှဲပေးကြပါ
ကားရောလူရောပျောက်ဆုံးနေလို့ ကူညီပြီး ရှဲပေးကြပါ “ကားရောလူရော ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးဖို့ မိသားစုမှ အကူအညီတောင်းခံထား “(ပြည်သူတဦးရေးသားအကူအညီတောင်းထားသည်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်) “ညီမ၏ခင်ပွန်း ယခုပုံပါကိုကျော်ငြိမ်းချမ်း သည် ပုံပါ MDY 4L 9011 Honda fit GP1(ခဲရောင်)ဖြင့်နံနက်၉နာရီခန့်ထဲက လပွတ္တာမြို့ ကောင်းမိုဘိုင်းဆိုင်မှ အ​ပြင်ခနထွက်သွားပြီးယခုတိုင်အဆက်အသွယ်မရသဖြင့်မိသားစုများမှအလွန်စိတ်ပူပန်နေပါသည် ။တွေ့ရှိပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၆၉၁၁၈၉၁၉၄/၀၉၄၂၂၄၈၉၁၉၄ တို့သို့အ​မြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။ မိသားစုနှင့် (ညီမနှင့်)မည်သည့်ပြသနာစိုးစင်းမှမရှိပါ ။ စိတ်ဆိုးသွားခြင်းမဟုတ်ပါ ။မုန့်သွားဝယ်ရန်ခနထွက်သွားရင်း ဖုန်းအဆက်သွယ်မရတော့လို့ပါ။လူပျောက်တိုင်ထားပါသည်။edit -သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရန်ကုန် ပန်းလှိုင်နားမှာ အဲ့ကားတွေ့လိုက်တယ်လည်းပြောပါတယ်။(ပန်းလှိုင်ဂိတ်မှာတော့ အဝင်မရှိဘူးတဲ့) ပင်လယ်လေးအလွန်နားမှာ ကားတွေ့တယ်လည်းပြောတယ်။ညီမယောကျ်ားကအဲ့လိုမျိုးခရီးဝေးကိုညီမ မပါပဲ မသွားဖူးပါ။စိတ်အရမ်းဆင်းရဲနေသောကြောင့် messenger မှ ဖုန်းများမကိုင်နိုင်သေးတာနားလည်ပေးကြပါ။ကျေးဇူးပြု၍shareပေးကြပါနော်” 36myanmarchannel ကားေရာလူေရာေပ်ာက္ဆံုးေနလုိ႔ ကူညီၿပီး ရွဲေပးၾကပါ “ကားေရာလူေရာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင့္ ေတြ႕ရွိပါက အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ မိသားစုမွ … Read more